Sony ga - akwụsị ire igwe na Latin America | Gam akporosis
Sony ịkwụsị ire ekwentị na South America
Edere Ferreno | | Noticias, Sony
Ọrịre Sony abụbeghị nke kachasị mma kemgbe ogologo oge. Companylọ ọrụ Japan, nke ụbọchị ya bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'ahịa, na-efunahụ ọnụnọ ahịa. Ọnwa ole na ole gara aga ụlọ ọrụ họọrọ megharia ụfọdụ n'ime nkewa ya, na mbọ iji melite nsonaazụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ kwuputara n'oge na-adịbeghị anya ịfefe ngwaahịa ya na China na Vietnam, iji belata ọnụahịa.
Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-akpọsa mkpebi ndị na-adịghị mfe. Dị ka Sony ịkwụsị ire ekwentị na South America na Central America, Latin America n'ozuzu, ya mere. Mkpebi ha mere n'ihi adịghị ike ahịa ha n'ahịa a.
Dị ka data ndị na-adịbeghị anya, Sony ekwentị ahịa dị ala karịa 30% site na afọ ndị gara aga. Nke doro anya na-eme ka o doo anya na ụlọ ọrụ ahụ efunahụla akụkụ a. N'oge gara aga MWC ika hapụrụ anyị na ọhụrụ phones, ịkụ nzọ na a ọhụrụ imewe, dị ka ndị Xperia 1 olma ọ bụ Xperia 10.
Ọ bụ ezie na ụdị ndị a abanyebeghị n'ụlọ ahịa. Yabụ n'oge ahụ amabeghị etu ndị ahịa ga-esi zaghachi ekwentị ndị a. Mana ahịa ụlọ ọrụ ugbu a adịghị mma, yabụ ha na-eme mkpebi dị oke egwu dị ka nke a.
N'afọ gara aga, Sony rere nde isii na ụwa niile. Ọ bụ ezie na anyị amaghị ka esi wee kee ahịa. Ọ bụ ezie na o doro anya na e nwere mpaghara nke ụlọ ọrụ na-ere nke ọma na South America abụghị otu n'ime ha. Ya mere, ha na-eme mkpebi ịhapụ mba ndị a.
Ọ bụ mkpebi na-ekwe nghọta. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ na-achọ inweta azụmaahịa telephony ya. Ihe ha ga-eme itinye uche na mbọ ha na ụfọdụ ahịa ụfọdụ. Ka oge na-aga, ọ dịbeghị ụbọchị enyere, ndị na-eri ihe na South America agaghị enwe ike ịzụta ekwentị Sony.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony ịkwụsị ire ekwentị na South America
Emeghị ngwa Google ka Google Play kwụsị
Sọpụrụ 20 Lite: smartphone ọhụrụ ahụ